Cash Game Allin Checker: Xisaabi xisaabtanka ka hor inta aanad wicin allin ciyaaraha qamaarka ee turubka
Waxaad horey u ogeyd muhiimadda ay leedahay xisaabi itimaalka ka hor inta aadan wacin a isku toosin al khamaarka qadka?
Halkan waxaan diyaar u nahay inaan ku tijaabino qaddarka barnaamij cusub oo loogu talagalay si loo xisaabiyo Suurtagalnimada inuu ku guuleysto a isku toosin Texas Hold'em.
Imisa jeer oo hore oo ka soo horjeedka ah allin preflop, gaar ahaan haddii aadan haysan gacanta ugu sarreysa, ma waxaad la kulantay inaad la kulantay caqabadihii ugu xumaa ee soo maray: Wicitaan ama Isku laab?
Mahadsanid Cash Game Allin Checker ma sii yeelan doontid shakiga noocan ah!
Barnaamijkan turub-ka ee khadka tooska ah wuxuu kaa caawin doonaa inaad fahamto haddii wicitaankaaga ugu dambeeya, sida iska cad mustaqbalka fog, uu leeyahay rajo wanaagsan xagga lacagta (EV +).
Xisaabinta khilaafaadka kaararka: ku adeegso miiska cagaaran
Sida loo isticmaalo Cash Game Allin Checker? Mid aad u fudud: kaliya gal labada goobood Bilaabidda Gacanta kaararkaaga bilowga oo sax ku dhig xulashooyinka Ku habboon / Ku habboonayn in kaararka ay isku mid yihiin iyo in kale.
In garoonka Dadka kasoo horjeeda (kuwa miiska ka soo horjeeda ee firfircoon), waxaad geli doontaa tirada ciyaartoyda ay tahay inay hadlaan adiga kadib, oo ay ku jiraan dabcan ciyaaryahanka oo dhan u galay.
Ugu dambeyntii, berrinka Wac Qadarka, waa inaad gashaa qiimaha wicitaankaaga ugu dambeeya.
Xisaabinta ixtimaalka: cdhammaantood ama laablaab?
Adoo gujinaya badhanka Hubi fursaddaada, ma aha oo kaliya inaad arki doonto boqolkiiba guusha gacantaada (Win%), laakiin waxa go'aamin doona ficilkaaga ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa qiimaha lagu soo sheegay sanduuqa Dheriga waa inuu ahaadaa, maxaa yeelay haddii qadarka dherigu dhab ahaantii ugu yaraan (ugu yaraan) uu tilmaamayo Cash Game Allin Checker, waxaad si kalsooni leh u wici kartaa allin-ka kaa soo horjeeda, xitaa haddii aad haysato laba kaar oo gabi ahaanba u muuqda kuwo aan fiicnayn.
Sababta Sababta oo ah haddii tusaale ahaan adoo adeegsanaya softiweerkan turubka khadka tooska ah waxaad arki doontaa in gacan sida 8 iyo 7 oo aan ku habbooneyn 5 qof oo kaa soo horjeeda aad ku guuleysan doonto 14% waqtiga, haddii aad allin ciyaareyso waxay kugu kacaysaa 2,5 euro (ama doolar) iyo dheriga marka hore wicitaanku waa uguyaraan 18 euro, waxay ka dhigan tahay inaad dhab ahaan dhigeyso 14% qadarkiisa dheriga ka hor wicitaankaaga, marka mustaqbalka fog tani waxay kuu keeni doontaa faa iido dhaqaale, oo u dhiganta sida saxda ah ee dheriga marka loo eego xisaabinta 18 euro ee ka socda barnaamijka.
Si aad u tijaabiso xeelado cusub, waxaad tusaale ahaan u isticmaali kartaa qalabkan lacagta kaashka ah ee ciyaarta qadka kaararka, si aad dhab ahaan u tagto oo u wacdo (ama u soo saarto) khadadka leh astaamaha loo baahan yahay, iyadoo dammaanad xisaabeed lagu helayo muddada dheer (muddada + EV +).
Ma jeceshahay barnaamijyada ThatsLuck? Ha seegin fursadda ah inaad kula socotid cusbooneysiinta daabacaadaha oo aad iska qorto ► Kanaalka Youtube, marwalba waa lagugu wargalin doonaa waqtiga dhabta ah ee ku saabsan dhammaan wararka softiweerka ee bogga.
Soo Degso Fayl	Allincheck.zip - 2 MB